Iindawo zeendawo ze-2.11 - Geofumed
Njengoko kuchazwe kwicandelo le-2.2, kwi-bar yokufikelela ngokukhawuleza kukho imenyu ehlayo eguqula umbane phakathi kweendawo zokusebenza. "Indawo yokusebenzela" ngokwenene isethi yemiyalelo ehlelwe kwi-ribbon ejoliswe kumsebenzi othile. Umzekelo, "Udweba i-2D kunye ne-annotation" amalungelo okusebenzela indawo phambi kwemithetho esetyenziselwa ukudweba izinto kumlinganiselo omabini kunye nokudala imilinganiselo ehambelana nayo. Okufanayo kusebenza kwi-workspace ye "3D Modeling", ebonisa imiyalelo yokudala imizekelo ye-3D, ibanike, njl njl.
Masibeke ngenye indlela: I-Autocad inomlinganiselo omkhulu wemithetho kwi-ribbon kunye neetrabars, njengoko sibona. Uninzi lwawo alukho konke olufanelekileyo kwisikrini ngexesha elifanayo kwaye, ngaphezu koko, ezinye zazo zihlala ngokuxhomekeke kumsebenzi owenziwayo, ngoko ke, abaprogram ba-Autodesk baye bahlela kulokho bakubiza ngokuthi "indawo zokusebenzela".
Ngoko ke, xa ukhetha indawo ethile yokusebenzela, idibhoni ibonisa isethi yemiyalelo ehambelana nayo. Ngoko ke, xa ushintshela kwindawo yokusebenzela entsha, iteksi iya guqulwa. Kufuneka ifakwe ukuba ibar yomgangatho iqulethe iqhosha lokutshintsha phakathi kweendawo zokusebenza.
Post edlulileyo«Edlulileyo 2.10 Imenyu yomongo
Post Next I-2.12 Ukulungiswa komsebenzisiOkulandelayo "